Isikhokelo sokuGqibela seVidiyo ezichazayo (enemizekelo) | Martech Zone
Isikhokelo sokuGqibela seVidiyo ezichazayo (enemizekelo)
NgoLwesibini, Juni 3, 2014 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Mhlawumbi ubonile iiwebhusayithi ezininzi zisebenzisa iividiyo zoopopayi kumaphepha abo okufika. Nokuba ungazichaza njani iividiyo ezichazayo okanye iividiyo zenkampani; Zonke zisebenza ngenjongo enye: ukucacisa imveliso okanye inkonzo ngendlela elula nekhawulezayo, ebenza babesisixhobo esikhulu sentengiso kulo naliphi na ishishini.
Kutheni le nto kukho iindlela ezahlukeneyo zokuchaza iividiyo? Uhlobo ngalunye lubhenela kuhlobo oluthile lwabaphulaphuli kwaye luya kuchaphazela uhlahlo-lwabiwo mali lwayo nayiphi na imveliso yevidiyo. Ukuze ufumane ingqalelo yabaphulaphuli bakho kwaye uqalise ukuguqula ngokwenene, kuya kufuneka uyazi nganye style yeVidiyo yokuchaza. Umbuzo ngulo:
Yeyiphi eyona ndlela ifanelekileyo yokuchaza ividiyo ophilayo kwiwebhusayithi yakho?
Siqokelele uluhlu lweendlela ezithandwayo zevidiyo zentengiso, kunye neengcebiso zethu ezizodwa nganye nganye.
Esi sisikrini esilula okanye ividiyo ebonisa indlela yokusebenzisa inkqubo, iwebhusayithi okanye isoftware. Iividiyo zeScreencast lolona hlobo lwevidiyo lwebhajethi esezantsi kodwa iluncedo ngokulinganayo. Ezi vidiyo zininzi malunga nemfundo kunokwenza uphawu. Ziividiyo ezinde ngokwesiqhelo (ngaphezulu kwemizuzu emi-5), kwaye zisebenza kakuhle kwabo bafuna ukubona indlela esebenza ngayo imveliso ngaphambi kokuba bathathe inyathelo.
Uhlobo lweKhathuni okanye iVidiyo yoPopayi yeVidiyo
Olu lolunye lweentlobo zevidiyo ezaziwayo ezichazayo kwintengiso. Ibali likhokelwa ngumlinganiswa ophilayo, oziswa ngengxaki enkulu angakwaziyo ukuyisombulula. Yilapho imveliso okanye inkonzo yakho ivela khona… ukugcina usuku!
Umlinganiswa uhlala emele uphawu lwakho lwentengiso (ekujoliswe kubo), ngoko ke kubalulekile ukuba ube noyilo lwesiko oluhambelana nabo, ulwenze uphawu lwakho ngokulunika imvakalelo kunye nobuntu. Ezi ntlobo zeevidiyo zineziphumo ezilungileyo kuba zikhawuleza zibambe ingqalelo yababukeli kwaye ziyonwabisa kakhulu ukuzibukela.
Le ndlela iqhelekileyo kwaye ipholileyo yenziwa kuqala ngumzobi obhale kwibhodi emhlophe ngelixa irekhodwa yikhamera. Emva kwexesha, obu buchule bavela kwaye ngoku benziwe ngokwamanani. Emuva ngo-2007, i-UPS yabonisa i-Whiteboard Commercials, kwaye ngo-2010 iRoyal Society of Arts yenza oopopayi bebhodi emhlophe kwiintetho ezikhethiweyo, isenza i-RSA ye-YouTube ijelo le- # 1 lingenzi nzuzo kwihlabathi liphela.
Iifilimu ze-Whiteboard yindlela efanelekileyo yokuzibandakanya, kuba inendlela yokufunda, apho umxholo wenziwe phambi kwamehlo ombukeli.
Imizobo eshukumayo, ngokuyintloko, zizinto ezibonisa intshukumo esebenzisa amandla emibala kunye neemilo ukuhambisa imiyalezo entsonkothileyo ebengazukukwazi ukuyidlulisa. Ezi vidiyo zibonelela ngeendlela zokuzibandakanya kumashishini aneeprofayili ezinzulu kwaye ziyindlela efanelekileyo yokuchaza iingcamango ezingabonakaliyo.
Ezi vidiyo zichazayo zinempembelelo ngakumbi kwimizamo yonxibelelwano yeB2B.
Imizobo yeMotion enezinto ze3D
I-Motion Graphics oopopayi ngokudityaniswa kwezinto ze-3D kuzisa inkangeleko entle nenobunkunkqele. Zikulungele ukwenza ukuba inkampani yakho ibonakale ngaphezu kokhuphiswano.
I-Motion Graphics lukhetho olufanelekileyo kwiinkampani kunye neemveliso ezinxulumene netekhnoloji entsha, iinkonzo zedijithali, usetyenziso okanye isoftware.
Uhlobo lweKhathuni ngeMotion Graphics
Uhlobo lweKhathuni yokuCacisa iiVidiyo ngeMotion Graphics lolunye lweentlobo ezithandwayo zevidiyo oopopayi phaya kwaye, ngokulula njengoko kuvakala, badibanisa ubuchule bokudibanisa. Abalinganiswa bekhathuni bakhokela ibali kwaye babonelele ngokusondela kubaphulaphuli, ngelixa ukusetyenziswa kwemifanekiso eshukumayo eshukumayo isetyenziselwa ukucacisa iikhonsepthi ezinzima.
Ngale ndlela, sifumana okona kulungileyo kuwo omabini la mazwe- Inqaku lobuhlobo kunye nezifaniso ezihlekisayo zevidiyo yekhathuni kunye namandla okubandakanya oopopayi bendlela yemizobo eshukumayo.
Sincoma unxibelelwano lwe-B2C, kodwa banokusebenza kakuhle kumashishini amancinci kunye nokuqala kwakhona.
Misa-eshukumayo okanye Claymation IiVideos zoopopayi
Ukuma-chaza iividiyo ezichazayo yenye yeendlela ezindala kuba zingaxhomekeki kubuchwephesha obuphezulu bedijithali! Ezi ziividiyo ezenziwe ngesandla-isakhelo esifezekileyo ngesakhelo.
Oopopayi baveliswa ngokurekhoda isakhelo ngasinye, okanye umfanekiso osekhona emva koko udlale isakhelo esibhaliweyo ngokulandelelana ngokukhawuleza, kuthatha ixesha elide ukuvelisa. Iziphumo zahluke ngokupheleleyo kwaye ziyamangalisa. Ukumisa isindululo yindlela entle xa yenziwe kakuhle, zinokubiza kakhulu.
Sicebisa olu hlobo lwevidiyo ukuba ufuna ukusebenzisa indlela enomdla kunye nabaphulaphuli bakho.
IiVidiyo zoPopayi ze3D
A ividiyo ye-3D yoopopayi ingamangalisa ngokwenene, kuba akukho mida kwinto enokufezekiswa yividiyo ye-3D. Nangona kunjalo, olu khetho lolunye lwezona zibiza kakhulu, ngenxa yoko ayilulo ukhetho lweziqalo kunye nohlahlo-lwabiwo mali olulinganiselweyo.
Ukuba ucinga ngenene ngokwenza ividiyo ye-3D ephathekayo kwaye unako ukuyifumana, kuya kufuneka wenze umsebenzi wakho wesikolo kuqala kwaye ukhangele iinkampani ezinamava. Uhlahlo-lwabiwo mali lwevidiyo ephantsi ye-3D inokukhokelela kwiziphumo ezibi.
Ngoku unokujonga ngokubanzi ukuba loluphi uhlobo lweevidiyo ezichazayo ezifanelekileyo kwishishini lakho 'lokufika, kwaye elinokuthi libambe ingqalelo yabaphulaphuli bakho ngokufanelekileyo. Ufuna ngaphezulu? Khuphela i-ebook yeYum Yum yeVidiyo yasimahla-Isikhokelo sokuGqibela kwiiVidiyo ezichazayo!
Ukubhengezwa: U-Yum Yum uncede ukubeka esi sithuba kunye Martech Zone abafundi kwaye sisebenze nabo ngokuthe ngqo kwiiprojekthi ezimbalwa!
tags: Iividiyo zoopopayi ezi-3d3d u mbonisoIvidiyo eyi-3dIvidiyo evakalayoividiyo yekhathuniIvidiyo yoopopayioopopayi bodongweudongweIvidiyo ecacisayoIividiyo ezichazayoimifanekiso ehambayoividiyo yemizobo eshukumayoscreencast ividiyoyima ngxiividiyo emhlophe yoopopayi yevidiyoIsichazi sevidiyo emhlophe
Abafazi kunye namadoda bayisebenzisa njani iMithombo yeendaba yezeNtlalontle kunye neeFowuni ngokwahlukeneyo
Imidiya yokuncokola ye-Unsexy B2B Industries
Sep 21, 2014 ngo-6: 04 PM
Ndikwi-habbit yokuseta olu hlobo lwezinto ngoko kuhle kwaye kuchazwe kakuhle ngomzekelo omhle.
Enkosi kakhulu ngesi sibhalo kunye nevidiyo.
Meyi 14, 2015 kwi-6: 16 PM
Ngoku ngalo lonke ixesha abathengi bam bebuza ukuba loluphi uhlobo lweevidiyo zokucacisa endizenzayo ndinesi sikhokelo siluncedo sokubabonisa. Enkosi uDouglas ngokubeka esi sikhokelo kunye. Ngaba ikhona into eninokuthi niyenze ukuze nibonise ishishini lam kwibhlog yakho? Ndibeka i-imeyile kwicandelo lokuphawula